महिनावारी हुँदा महिलामा यौन उत्तेजना किन बढ्छ त ? (थाहा पाउनुहोस) | Hulaki Online
महिनावारी हुँदा महिलामा यौन उत्तेजना किन बढ्छ त ? (थाहा पाउनुहोस)
यौन इच्छा भनेको अहिले सामान्य हो यो केटा केटी सबैमा हुन्छ । कसैले खुलेर यस बारे भन्दा छन् भने कसैले भन्दैनन् ।मानिसमा किशोरावस्थाबाट यौन इच्छा जागरूक हुन्छ । उचित समय, परिस्थिति र व्यक्तिको उपस्थितिमा यो इच्छा यौन सम्पर्कमा परिणत हुन सक्छ । तर यौनसम्पर्कको चाहनाका बारेमा समाजमा विभिन्न किसिमका धारणाहरू विद्यमान छन् ।
अहिलेसम्मका खोज अनुसन्धानहरुको निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ की पुरूषको यौनइच्छा स्थिर रहन्छ । तर महिलाको यौनइच्छा भने उसको महिनावारीको समयअनुसार फरक फरक हुन्छ । यौन तथा प्रजनन् विज्ञहरुका अनुसार महिलाको महिनावारी भएको पहिलो र तेस्रो हप्ता यौन उत्तेजनाको दृष्टिकोणबाट सहज अवस्था हो । बाँकी हप्ता भने उसको लागि यौन उत्तेजना उत्पन्न गराउन केही असहज समय हो । यसको कारक तत्व भने रागरसहरूको उत्पादन र त्यसको प्रभावलाई नै मानिएको छ । केही केटीहरूमा किशोरावस्थाको पूर्वावस्था (१०–१४ वर्ष) मा यौनचाहना सुषुप्त रूपमा रहन्छ भने मध्य किशोरावस्थामा (१५–१७ वर्ष) यौन चाहना पूर्ण रूपमा सक्रिय हुने हुन्छ । तर यही उमेरका किशोरहरू भने किशोरीहरूको तुलनामा केही बढी भावुक हुने, यौन चाहनातिर भन्दा बढी सम्बन्ध बिस्तारतिर ध्यान दिने भएकाले समाजमा केटाभन्दा बढी केटीको यौनचाहना बढी हुन्छ भने धारणा छ । हाम्रो समाजमा यस अवस्थाका केटीहरू आफ्नो चाहना पूर्ण रूपमा बाहिर ल्याउन सक्तैनन् । उनीहरू आफ्नो चाहनालाई दबाएर राख्छन् र प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो इच्छालाई अगाडि आउन दिँदैनन् ।
१५ देखि १७ वर्षका किशोरावस्थाका केटीहरू श्रृगार सामग्रीको प्रयोग गर्ने, समूहमा आफूलाई सबैभन्दा राम्रो देखाउने, सफा सुग्घरमा बढी ध्यान दिने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने गर्दछन् । समय परिस्थिति र आफू बस्ने समाजको मूल्य मान्यता रहनसहन अनुसार व्यक्तिहरूमा यौन चाहना फरक फरक हुन्छ । त्यसैले केटा वा केटीमध्ये कसलाई बढी यौनचाहना हुन्छ भन्न गाह्रो छ । यो समय र ठाउँ हेरेर पनि यसको इच्छा हुने गर्द छ ।